အက်ဆစ်ဆိုတဲ့လူ အတွေးအမြင်ကို အရင်တုန်းကသဘောကြတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ရှိအတိုက်အခံအင်အားစုတွေကို အားမလိုအားမရဖြစ်နေတာကိုထောက်ပြတဲ့အနေလို့ မြင်မိတယ်။ လှုပ်ရှားမှု ပြင်းထန်လာအောင် လှုံ့ ဆော်ပေးတယ်ထင်လို့ အားပေးမိတယ်။ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့ဂ်မှာဆိုတော့။ အက်ဆစ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါကို ဘုန်းကျော်ဘလော့ဂ်မှာတင်ကြည့်ပါလား။ ဘယ်သူမှ ဂရုတစိုက်နဲ့ဝေဖန်လေကန်မှာမဟုတ်ဘူး။
NLD ကို အားမရဘူး။ ဒေါ်စုဦးဆောင်မှု မပြတ်သားဘူး။ ပြည်ပအတိုက်အခံဘာညာဖြစ်တယ်။ ပြောရင်တော မဆုံးတော့ပါဘူး။ ကျနော်လည်း ဝေဖန်ရေးဆရာတော့မဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်းက ကလူဟာ ပြည်တွင်းအကြောင်းကိုသိနိုင်မယ်။ ပြည်ပက လူလည်းပြည်ပအတိုက်အခံကြောင်းကို သိမယ်။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ပဲ။ အက်ဆစ်ကလည်း အက်ဆစ်အကြောင်းပဲသိမယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အက်ဆစ်ကတော့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘလော့ဂ်မှာ သူကြိုက်သလိုတွေး၊ ရေး၊ လုပ်တာကို ကျနော်က အားအားယားယားဒီလိုပြန်ရေးမိတော့ ကျနော့်အပြစ်ပဲဖြစ်တာပေါ့။ ဒါနောက်ဆုံးပါပဲ အက်ဆစ်ကို စကားယှဉ်ပြောရတာမောပါပြီ။ အက်ဆစ်က ရန်သူ့လူပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ ကိုယ့်အမြင်ကို နာမည်ဝှက်နဲ့ ရေးတာကြောက်စရာလားဗျာ။
ကျနော်တော့ နောက်တစ်ခါ အက်ဆစ်ဆိုတဲ့လူရေးတဲ့ဆောင်းပါကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ဖတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, September 26, 2010
ဘုန်းကျော်(လူ့ဘောင်ချစ်) နဲ့ kyawhtin
နအဖလူလို့ စွပ်စွဲပြီး ကျောင်းသားအချင်းချင်း သတ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းအမှားကို သင်ခန်းစာယူသင့်တယ်။ စိတ်တိုင်းမကျတာနဲ့ ဘာလို့ စွပ်စွဲတာတွေ .. တံဆိပ်တပ်တာတွေ လုပ်ချင်ရတာလဲ? ဒီဆောင်းပါးရှင် အက်ဆစ်ဟာ ဦးလွမ်းဆွေ ဟုတ်မဟုတ် ထည့်ပြီး စဉ်းစားဖို့မလိုဘူး။ အဓိကအရေးကြီးတာက အဲဒီဆောင်းပါးထဲက အကြောင်းအရာတွေဟာ မှန်လားမှား လားဆိုတာပဲ စဉ်းစားရမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့က လေးတွေမှ မဟုတ်တာ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားပေါ့။ မှန်ကန်မှုတွေရှိနေရင် အမြင်မတူပေမယ့် သဘောထားကြီးစွာနဲ့ လက်ခံလိုက်ပါ။ မမှန်ကန်ဘူးလို့ ယူဆနေရင် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်ရှင်းပြပါ။ ကော်မန့်မှာ ရေးရတာ မထိရောက်ဘူးလို့ ယူဆရင် ချေပတဲ့ ဆောင်းပါးရေးပြီး ဦးလွမ်းဆွေကို တင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့မှာ အက်ဆစ်နဲ့ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရှိနေတာပဲ။ အဲလို အခွင့်အရေး တန်းတူဖြစ်နေတာကို မကျေနပ်ဘူးလား? ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်ဆို? လုပ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ စိတ်ဓါတ်က စစ်အဏာရှင်ပုံစံတွေပဲ။ သေသေခြာခြာစဉ်းစားပါ. . . ခင်ဗျားတို့ တကယ်လိုချင်နေတာ စစ်အဏာရှင်စံနစ်ပါဗျာ။
ကလေးလိုလို ခွေးလိုလိုနှင့် . . လူကြီးမပီသသူများကို တိုက်ခိုက်နေသည့်